Hlangana ne-Young Sunshine ye-Intanethi, u-Princess Amreen Malhotra - Indiya
Hlangana ne-Young Sunshine ye-Intanethi, u-Princess Amreen Malhotra
Meet Internet S Young Sunshine
Isikweletu: Izithombe ezabiwe yiqembu likaPrincess Amreen
“Sanibonani bangani,chai pi lo! ', Ngaphandle kokuthi ubuthongo esigxotsheni esisenyakatho kusukela ngonyaka we-2018, cishe akunakwenzeka ukuthi uphuthelwe yintombazanyana esho le nkulumo ngqo ngokukhanya kwamalanga ayishumi. Ngisemncane ngineminyaka emihlanu nje futhi nginabalandeli abacishe babe yingxenye yesigidi se-instagram, intombazane elangeni u-Amreen Malhotra uyinkanyezi uqobo lwayo. U-Amreen waduma waduma ngoJulayi wezi-2018 ngevidiyo yakhe enza ukushintshashintsha kwe- “hello abangane chai pilo”. Ngokushesha ukuthungathwa okwanele kwegama lakhe kwangena ngophahla. Amavidiyo akhe amabili okuqala eyedwa athole izigidi zokubukwa, kusukela. Ngemuva kwalokho, okuthunyelwe kwakhe bekuthola ukunakwa okukhulu njengoba uPrincess Amreen ebeka uphawu lwakhe ekuphakeleni nasezingqondweni zethu ngokufanayo.
Umdwebo awusebenzisile kwividiyo yakhe yokuqhuma washeshe waphendula lo mculi omncane waba meme. U-Amreen uthathe izinhliziyo zabaningi be-netizens ngamehlo akhe athambile we-hazel, ukumamatheka kwakhe okukhazimulayo futhi kwesinye isikhathi okungapheli, okuthandekayo. Ikhasi lakhe, eliphethwe ngumalume wakhe nonina, likhipha amavidiyo angahambisani, okuthunyelwe nezibuyekezo ngempilo yakhe futhi nje asikwazi ukuthola okwanele ngale nkanyezi encane!
U-Amreen uyayithanda imfashini. Mnike iminyaka embalwa futhi siqinisekile ukuthi uzoba ngumfashini ozobalwa naye. Ezinye zezinto azithandayo zihlanganisa ukubhaka, ukucula nokudansa. Ngemuva kokuzama isandla sakhe ekubhakeni okokuqala ngqa ngesikhathi se-Indulge Fest, wanqotshwa ngokuphelele yile nqubo. Asisho ukuthi uhlose ukuba ngumpheki wamakhekhe zisuka nje, kodwa uqinisekile ukuthi ungumuntu ongeke azibalekele izinselelo.
Njengoba u-2020 ubengaphansi kokujabulisa iningi lethu kanjalo naku-Amreen. Ukujwayela isikole esiku-inthanethi, ukungazungezwa ngabangani noma ukukwazi ukuya emicimbini yosuku lokuzalwa ngezingubo zakhe zenkosazana bekuyinselelo kuye kepha uthole amalayili esiliva kulezi zimo ezinzima. Njengodadewabo omncane, u-Amreen uchithe isikhathi esiningi nomfowabo, exhuma kabusha futhi wamane nje wasondelana phakathi nobhadane. Akukuhle lokho? Intombazane kamama, u-Amreen uthanda ama-unicorn, umama wakhe, u-maggi (akukho nge-oda elithile esethemba ukuthi!) Futhi ugcina ukudonsa okukhethekile okuya eMumbai futhi ufisa ukuvakasha maduzane. Sizwile amahlebezi okuthi le nkanyezi esencane ifuna ukuba yinkosazana lapho isikhula futhi kufanele sisho ukuthi lawo ngamaphupho amakhulu ngephakeji elincane kodwa siyethemba ukuthi uthola wonke amathuba okwenza ukuthi wonke amaphupho agcwaliseke.
Waziwa ngamavidiyo akhe njenge‘Paani pilo girl’, U-Amreen useqalile ukusebenzisana nemikhiqizo efana nomgqugquzeli osemncane nongezayo. Eminye yemikhiqizo abambisene nayo yile: Pampers, Volvo, Gini & Jony, Odomos. Ngokwengeziwe, u-Amreen naye usayinelwe iqhaza lokukhiqiza i-Premraj Films enegama'URadha kyun gori main kyun kala'.
Njengengane evezwe emhlabeni wezinkundla zokuxhumana futhi izungezwe amathonya ayo, abazali bayo nomalume wakhe bathathe izinyathelo zokuyivikela ebubini obuza nayo ngokumvimbela ekubeni kulezi zinhlelo zokusebenza ngokwakhe.
Kuphephile ukusho ukuthi abantu bamgeze ngothando olukhulu futhi sikulungele lokho!
ama-yoga asanas namagama abo
ukulingana okuphelele kowesifazane we-libra
hollywood ama-movie angokomlando amahle kakhulu
izinhlobo ze-asanas ku-yoga enesithombe
zakamuva hollywood izindaba zothando ama-movie
uhlu lwama-english love movie
ngubani unkosikazi kaJohn cena